बलात्कारको मनोविज्ञान : सम्झना बन्ने कि कमला ? « Janata Samachar
बलात्कारको मनोविज्ञान : सम्झना बन्ने कि कमला ?
असोज २९ गते बिहीबार बिहान कार्यालय पुग्नासाथ एक जना सरले भन्नुभयो, ‘गुड न्यूज छ, चाँडै कम्प्युटर अन गरेर साइड हेर्नु ।’ समाचार हत्याको थियो । हत्याको समाचार कसरी ‘गुड’ हुनसक्छ ? तर अहिले कोरोना महामारीका कारण पोजेटिभ शब्द जसरी विश्वका लागि नेगेटिभ बनिरहेको छ, त्यसैगरी साँच्चै त्यो हत्याको समाचार पनि सरले भन्नु भएझैँ ‘गुड न्यूज’ लाग्यो ।
समाचारको शीर्षक थियो ‘बलात्कारको प्रयास गर्ने पुरुषको महिलाले गरिन् हत्या’ । धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिका–१ मारेककटहरेकी कमला गुरुङले आफूमाथि बलात्कार प्रयास गर्ने लिलबहादुर गुरुङको खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरेकी रहिछन् । मध्यरातमा घरको ढोका फुटाएर आएका लिलबहादुरले आफूमाथि बलात्कार गर्न लागेपछि खुकुरी प्रहार गरेको र उनको मृत्यु भएको कमलाले स्वीकार समेत गरेकी छन् ।
बलात्कार, हत्या, हिंसाका घटना मात्र सुनेर हैरान भएको मनलाई यो समाचारले थोरै शितलता थपेको महसुस भयो । सोचे यस्तै घटनाका ५,७ वटा समाचार लगातार आउने हो भने पक्कै पनि ती बलात्कारी मानसिकताले बलात्कार अघि कम्तिमा पनि दश पटक सोच्थ्यो । तर बिडम्बना यस्ता घटना अपवाद जस्तै छन् । यहाँ त बलात्कारपछि पनि परिवारको इज्जतको नाममा शारीरिक र मानसिक पीडालाई सहँदै मौन बस्न बाध्य छन् बलात्कृत शरीरहरु । कहीँ पाँच सय रुपैयाँमा त कतै विवाह गर्ने आश्वासनमा बिक्न बाध्य छन् बलात्कृत मनहरु ।
पछिल्लो समय देशमा दैनिक नाबालिकादेखि ९० वर्षीया वृद्धासहित ७ जनाको बलात्कार भइरहेको तथ्यांक गृहमन्त्रालयले निकालिरहेको छ । यो समय बलात्कारका डर लाग्दा तथ्यांकले छोरीका अभिभावकलाई छोरी बलात्कृत हुने डर र छोराका अभिभावकलाई कतै छोरो बलात्कारी होला कि भन्ने डरले तर्साइरहेको देखिन्छ । हाम्रै देशमा प्रत्येक वर्ष दुई हजारभन्दा बढी महिला बलात्कारको शिकार बन्ने गरेको तथ्यांक देखिन्छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो दुई वर्षमा चार हजारभन्दा बढी महिला बलात्कृत भएका छन् । २०७५/७६ मा दुई हजार दुई सय ३० जना महिला बलात्कृत भएका छन् भने ११ जनाको बलात्कारपछि हत्या भएको पाइएको छ । त्यसैगरी २०७६/७७ मा दुई हजार एक सय ८४ जना महिला बलात्कृत भएका छन् । दुई जनाको बलात्कारपछि हत्या भएको तथ्यांक छ । दुई वर्षको अवधिमा चार हजार चार सय ४१ महिला बालत्कृत भएकामा १३ जनाको बलात्कारपछि हत्या गरिनु कुनै सामान्य तथ्यांक होइन ।
२०७७ को ६ महिना बित्दा आइपुग्दा १२ सयभन्दा बढी महिला बलात्कारको शिकार बनिसकेका छन् । तथ्यांकमा सार्वजनिक घटना त केवल प्रहरीमा उजुरी परेका घटना मात्र हुन् । डर, त्रासले घरपरिवारमै नसुनाइएका, घर परिवारमा सुनाएर इज्जतका लागि भन्दै गुपचुप गरिएका, गाउँले मिलेर मित्रापत्र गरिएका, विवाह गरेर मिलाइएका, प्रहरीले समेत मिलापत्र गरेर फर्काइएका घटना कति होलान ? अनुमान मात्र गर्दा पनि कहाली लागेर आउँछ । बलात्कारपछि न्याय नपाएर आत्महत्या गरेका बालिका, किशोरी तथा महिलाको निधनलाई आत्महत्या भन्ने कि हत्या ? बलात्कारलाई पैसासँग समाजले नै साटिदियो भने बलात्कारीले बलात्कारलाई गल्ती सम्झेर सुध्रने कि पैसा तिर्दै बलात्कार गर्न हौसिने ?
बलात्कारको यस्तो डरलाग्दो तथ्यांक सार्वजनिक भइरहँदा जिम्मेवार व्यक्तिहरु गैरजिम्मेवार जस्तै बनेर जवाफ दिन्छन्, ‘बलात्कारको घटनामा विश्व परिवेश हेर्दा नेपाल पछि नै छ । सवा दुई सय देशको अवस्था हेर्दा धेरै चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छैन ।’
एकातिर बलात्कारको डरलाग्दो तथ्यांक अनि अर्कोतिर जिम्मेवार व्यक्तिहरुको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति । यस्तो अभिव्यक्ति सुनेर बलात्कारपछि शारीरिक र मानसिक पीडामा छटपटाइरहेकी बालिकामा कस्तो असर पर्यो होला ? बलात्कारपछि हत्या गरिएका सम्झना, निर्मलाहरुको आत्मा कति रोयो होला ? नातिनातीनाको पनि विवाह गर्ने उमेरमा बलात्कृत भएकी ९० वर्षया वृद्धाकाे मनाेदशा कस्ताे भयाे होला ? एक पटक सोच्नु पर्दैन ? राज्यले न्याय दिन नसकेपछि, अपराधिलाई गतिलो सजाय दिन नसकेपछि कमसेकम सान्तवना दिनुपर्ने ठाउँमा यस्तो घृणित अभिव्यक्ति दिन मिल्छ ?
यस्तो अभिव्यक्ति सुनेर कसैलाई लाग्दैन बलात्कृत मानसिकता राज्यमा पनि जिवितै छ ? दिनप्रति दिन आउने बलात्कार, बलात्कारपछि हत्या, बाबुद्वारा छोरीको बलात्कार, आफ्नै दाजुले गरे बहिनीको बलात्कार जस्ता शीर्षकका डर लाग्दा समाचारले तर्साइरहँदा, अपराधीले सजाय नपाइरहँदा, पीडित बालिकादेखि वृद्धासम्मले न्याय नपाईरहँदा र राज्य गैरजिम्मेवार बिनिदिँदा तपाईलाई कमला गुरुङ बन्न मन लाग्दैन ? कमला गुरुङ बन्न सकिएन भने सम्झना त पक्कै बन्नुपर्छ, निर्मला बन्नुपर्छ । तपाई कमला बन्ने कि निर्मला ? कमला बन्ने कि सम्झना ? छोरीहरुलाई कमला बन्न सिकाउने कि निर्मला बन्न ?
(प्रस्तुत लेख अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली पत्रकार सञ्जाल इञ्जाको सहयोगमा तयार पारिएको हो ।)